The Captain (2017) The Captain (2017) ဒီဂျာမန်ကားလေးကတော့ 2017 ကထွက်ရှိလာတဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rating တွေအနေနဲ့လဲ Imdb Rating 7.4/10 Rotten Tomatoes 86 တောင်ရရှိထားတာပါ။ ဂျာမနီရုပ်ရှင်လောကမှာ Best Feature Film, Best Supporting Actor, Best Score, Best Editing စတဲ့ဆုလေးဆုလောက် ဆန်ကာတင်ဝင်ထားတဲ့ကားလေးပါ။ အဖြူအမည်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ပုံရိပ်တစ်ခုကိုပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဖော်ထားသလိုပါပဲ။ စစ်ကားကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအဖို့တော့ တော်တော်လေးအကြိုက်တွေ့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အကျဉ်းကိုလဲ တင်ပြပါဦးမယ်။ စစ်ပွဲကြီးပြီးကာနီး နှစ်ပတ်အလိုမှာစစ်ပွဲကနေ စစ်သားတွေအများအပြားထွက်ပြေးကြပါတယ်။ နောက်ကလိုက်ဖမ်းသူတွေ ထွက်ပြေးသူတွေ သုတ်သင်ပစ်သူတွေနဲ့ ငရဲပွက်နေချိန်မှာ တပ်သားလေးတစ်ဦးဟာ ဗိုလ်ကြီး ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကစပါတော့တယ်။ဗိုလ်ကြီး ဟာရိုးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဗိုလ်ကြီးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ တပ်သားလေးဟာ ဘယ်လိုဆက်ရှင်သန်မလဲ? တပ်ပြေးမှန်းသိရင် ခြွင်းချက်မရှိ သတ်ပစ်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှာ သူဘာဆက်လုပ်မလဲ? စတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှူရမယ့်ကားကောင်းလေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် The Captain (2017)ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ File ...
Muay Thai Fighter ( 2007 ) ထိုင်းရိုးရာ မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ကားတွေနှစ်သက်သူတွေ အတွက်တော့ ကျေနပ်စေမယ့်ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ရွာလေးတစ်ရွာမှာအတူတူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်း၃ယောက် မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ပညာကိုမြတ်နိုးတဲ့လူငယ်လေး၃ယောက်ဟာ အိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘန်ကောက်လာခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ကိုမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေကဆီးကြိုနေပါတယ် လောကဒဏ်ကြောင့်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ဟာ မြေအောက်လူဆိုးဂိုဏ်းကိုရောက်သွားပြီး၁ယောက်သာ မွေထိုင်းအိပ်မက်လမ်းကိုဆက်လျှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေဟာဘာတွေကိုရင်ဆိုင်ရမလဲ နောက်ဆုံးမှာသူငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားကြမလဲ ဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန် နုမွန် ဖြစ်ပါတယ် Encoded By LK
True Sight (Ti8) (2019) True Sight 2018 Dota ကစားသမားတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့True Sight2018ကတော့ ထွက်ရှိလို့ပါပြီ True Sightဆိုတာကို တော်တော်များများကသိကြပေမယ့် မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ် The Internationalဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမှDota2အသင်းများဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့TI ပြိုင်ပွဲကြီးကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလာတဲ့အခါမှာအခုဆို ၈ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးတိုင်း နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အသင်းတွေရဲ့ Stageနောက်ကွယ်က အခြေအနေအတွေ Player တွေတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့Final ၅ပွဲအတွင်း စိတ်ခံစားမှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို ရိုက်ပြထားတာကိုTrue Sightလို့ ခေါ်တာပါ တကယ်တော့ နားလည်လွယ်အောင်သာဇာတ်လမ်းလို့ခေါ်တာပါ ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး Playerတွေရဲ့သဘာဝစစ်စစ်တွေကို ပြသထားတာပါ အခုဒီTrue Sightကတော့ မနှစ်ကယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့TI8 Finalမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ PSG.LGD အသင်းနဲ့ OGအသင်းတို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပြသထားတာပါ OGအသင်းက TIဝင်ပြိုင်ခါနီးမှာ အသင်းသား၂ယောက် ထွက်သွားတာကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ကမန်းကတမ်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားရတာပါ PSG.LGD တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းကတော့ လူတိုင်းစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အသင်းပါ မယုံနိုင်စရာပဲ ကမန်းကတမ်းလူစာရင်းနဲ့ OGကFinalကိုတက်လာနိုင်ပြီးတော့ PSG.LGDနဲ့ ဖိုင်နယ်မှာပြန်တွေ့ပါတယ် (ပထမတစ်ခါ TI8 အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာတွေ့တော့OGကနိုင်ခဲ့တာပါ) ဒါပေမယ့်လဲOGက TIချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဝေးလို့Finalတက်ဖို့တောင်အနိုင်နိုင်လို့ထင်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးပါ ဒါပေမယ့်လည်းOGတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် OGဟာအရာရာ ဆုံးရှုံးခဲ့သူပါ အသင်းသား၂ယောက်ဆုံးရှုံးရတယ် ဖိနှိပ်မှုတွေခံရတယ် ဒါပေမယ့် ဘာမှထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့တဲ့ သူတစ်ယောက်က လောကမှ ကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား... OG မှာ နိုင်လဲအမြတ် မနိုင်လဲ အရင်း ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ပါဘူး သူတို့ ရလဒ်ကို ...
True Sight (Ti8) (2019)
The Witness(2018) The Witness(2018) IMDb....5.5 ဟန်ဆောင်းဟွန်းတစ်ယောက် အလုပ်တစ်ခု အောင်မြင်တာနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကို အရက်တိုက်ရ ပြုစုရဆိုတော့ အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတယ်... အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မနက် ၁ နာရီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ မိန်းမနဲ့ သမီးလေးကလည်း အိပ်နှင့်နေပြီ... ထုံးစံအတိုင်း ချက်ချင်းမအိပ်သေးဘဲ ဘီယာလေးကိုမြုံနေလိုက်သေးတယ်...အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ တိတ်ဆိတ်တဲ့မနက်ခင်း တစ်နာရီကို ထွင်းဖောက်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြောက်လန့်တကြားအော်သံကို သူကြားလိုက်ရတယ်.... ဒါကြောင့် ပြတင်းပေါက်ကနေ အသံကြားရာဆီကို သူလှမ်းကြည့်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးအနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ လူတစ်ဦးက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မသေမချင်းခေါင်းကို ထုရိုက်သတ်နေတာသူတွေ့လိုက်ရတယ်... ရဲကိုဖုန်းခေါ်မလို့ပြင်ပြန်တော့ ကြောက်လွန်းလို့တုန်နေတဲ့သူ့လက်ကြောင့် ဖုန်းလည်း လွတ်ကျတဲ့အပြင် မိန်းမကတစ်ရေးနိုးတော့ မီးဖွင့်တာကြောင့် လူသတ်သမားက သူတို့တိုက်ခန်းကို သတိထားမိသွားလေရဲ့........ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် လူသတ်သမား..မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦး....လူနေအဆောက်အဦးရှေ့မှာရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံရတဲ့ အလောင်းတစ်လောင်း.. အမှုလိုက်ရဲအရာရှိတွေ..... ကိုင်းရှေ့ဆက်ဖြစ်မယ်ဟာတွေကိုတော့ ဇာတ်ကားကြည့်ရင်းသာခံစားကြပေရော.... ဒီကားက IMDb 5.5ကို သံသယဖြစ်နေရင် သို့မဟုတ် တခြားတစ်ယောက်က မကောင်းလောက်ဘူး ထင်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ရင် ခင်ဗျားသာ Crime ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းနှစ်သက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါက လာပြောတဲ့သူကို ဒိုးလိုက်တော့လို့ ခွန်းတုံပြန်ပြီး နင်းကန်သာဒါင်းကြည့်လိုက်ပါ... ပြီးတော့ ဒီကားက hero ဆန်ဆန်ကြီးမပါတဲ့အပြင် တကယ့် Realism ဆန်ဆန်လေးရိုက်ထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်.. လူအချို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားတွေ ကျဉ်းထဲကြတ်ထဲရောက်ရင်ရင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပုံတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်..အကယ်၍များ ဟန်ဆောင်းဟွန်း နေရာမှာ ...
Baazaar (2018) Baazaar ဆိုတာ အိန္ဒိယအခေါ်အရ ဈေး ၊ ဈေးကွက်ပေါ့.... ဟုတ်ပါတယ် ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်း ရောင်းသူရှိမယ် ၀ယ်သူရှိမယ် ဈေးအပြိုင်တင်တာ ချတာတွေ အပြင်ရောင်းသူ ၀ယ်သူနှစ်ဦးကြားက ပင်မဦးတည်ရာ အရှုံးနဲ့ အမြတ်ဆိုတာလည်း ရှိမှာပေါ့.... ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတော့ တွေးစရာတွေက ခေါင်းထဲမှာ အစပေါင်းများစွာ ထွက်လာတယ်... ဘ၀သရုပ်ဖော်လို့ ပြောရမလား စီးပွားရေးလောက အကြောင်း ၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းလား ဒါမှမဟုတ် ကြီးပွားချမ်းသာချင်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲလား... ကိုယ်လိုချင်သလို ယူလို့ ရပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်က ရသစုံ ပါဝင်နေတဲ့ ဟင်းလေးအိုးကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ.... ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက ဘ၀ကို ချို့ ချို့ တဲ့တဲ့ နေလာခဲ့ရတဲ့ရှာကွန်းကိုသာရီ..... မိဘရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်ကနေ ထိုးထွက်ပြီးအလင်းရောင်ရှိမယ်ထင်တဲ့ မွန်ဘိုင်းမှာ အခြေချပြီးဘ၀ကို တက်လမ်းရှာချင်နေသူ လူငယ်လေး ရီဇ်ဝမ်အာမက်.... မြို့ ပြရဲ့ လူနေမှုစရိုက်တွေကြားမှာသိက္ခာနဲ့ ငွေကို အလဲအထပ်လုပ်နေမိတဲ့ မိန်းကလေး ပရီယာရိုင်း... ဒီဇာတ်ကောင် သုံးခုက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ပင်စည်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကုမဏီအုပ်စုတွေ ၊ သူတို့ မိသားစုတွေအကြောင်းနဲ့ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အကြောင်းတွေက ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အကိုင်းအခက်တွေလို့ ပြောရမှာပါ.... ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ညွှန်းပါရစေ.... ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် ...
Go Brother! ( 2018 ) အစ်​ကို့ရဲ့အနိုင်​ကျင့်​မှု​တွေကိုအမြဲခံ​နေရတယ်​လို့ ထင်​​နေ​တဲ့​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ သူ့​မွေး​နေ့မှာ သူ့အစ်​ကိုကိုသူ့ဘဝထဲက​နေ​ ပျောက်​သွား​စေဖို့ဆု​တောင်းခဲ့မိပါတယ်​၊ ​နောက်​တစ်​​နေ့ပြန်​လည်​နိုးထလာချိန်​မှာ​တော့ အံ့အားသင့်​ဖွယ်​ကိစ္စကဆီးကြို​နေခဲ့ပါတယ်​၊ သူမရဲ့အစ်​ကိုကသူမဘဝထဲက​ပျောက်​ကွယ်​သွားခဲ့ပြီး သူမသူငယ်​ချင်းရဲ့အစ်​ကိုဖြစ်​​နေတဲ့အခါဘယ်​လို​တွေဆက်​ဖြစ်​လာမလဲ.. သူမရဲ့အစ်​ကိုက​နောက်​ကွယ်​က​နေ ညီမ​လေးကိုဂရုစိုက်​တာ​တွေ၊ဖြည့်​ဆည်း​ပေးတာ​တွေကို မြင်​လာရတဲ့အခါ သူမရဲ့အစ်​ကိုကိုပြန်​ရနိုင်​ပါ​တော့မလား၊ ​မောင်​နှမနှစ်​​ယောက်​ကြားကသံ​ယောဇဉ်​၊ အထူးသဖြင့်​အစ်​ကိုကညီမ​လေးအ​ပေါ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာတရားကို ဆွတ်​ပျံကြည်​နူးဖွယ်​ခံစားကြည့်​ရှုရမှာဖြစ်​ပါတယ်​၊ ကျွန်​​တော့အမြင်​အရ​တော့..ကြည့်​ရင်းနဲ့အစ်​ကိုမရှိတဲ့သူ​တွေလဲ အစ်​ကိုတစ်​​ယောက်​​လောက်​​လိုချင်​မိမှာဖြစ်​ပြီး... အစ်​ကိုရှိပြီးသားသူ​တွေလဲကိုယ့်​ရဲ့အစ်​ကိုကို ပိုပိုချစ်လာလိမ့်မယ်ထင်မိပါတယ်.. အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန် ဖြိုးဇော် ဖြစ်ပါတယ် Encoder : LK
Godzilla: The Planet Eater (2018) 20ရာစုရဲ့ ​နေ့တစ်​​နေ့မှာ ဒီဇာတ်​လမ်းစခဲ့တယ် ​ အရာရာဟာ ဘုရားသခင်​ အလို​တော်​အတိုင်းပါပဲ.. ​ကောင်းကင်​​မှာ မီးမိုး​တွေ… ကမ္ဘာ​မြေကြီးဟာလည်း ပပ်​ကြား​တွေအက်​လို့… လူ​တွေအားလုံးရဲ့ ​ဆောက်​တည်​ရာမဲ့ ကူကယ်​ရာမရှိ ​ပြေးလွှားသံ​တွေ… ဒီအချိန်​မှာ အပြာ​ရောင်​အလင်းတန်းကြီး တစ်​ချက်​​ပေါ်လာ… အဲဒီအလင်းတန်းရဲ့ အစမှာ ​ဂေါ်ဇီလာဟာ အရာအားလုံးကို မိုးကြည့်​လို့… Godzilla: Planet Eater (2018) Netflix's Anime movie ဖြစ်တဲ့ "Godzilla: Planet of the Monsters" ကနေအစပြုခဲ့တဲ့ Trilogy သုံးကားရဲ့ သုံးကားမြောက်နဲ့ နောက်ဆုံးကားဖြစ်တဲ့ Godzilla: Planet Eater (2018) ဇတ်ကားပါ ရှေ့မှာ "Godzilla: Planet of the Monsters" နဲ့ "Godzilla: City on the Edge of Battle" ဆိုပြီး နှစ်ကားထွက်ထားပါတယ် ရှေ့နှစ်ကားကြည့်ပြီးမှ အခုကားကို ချိတ်ဆက်မိဖို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် အခုကားက "Godzilla: City on the Edge of Battle." ...
[18+] Hana Torikago (2013) [ Dark Side Production မှ တင်ဆက်သည်။ ] ငယ်စဉ်ကတည်းက ပထွေးရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်ခံထားရတဲ့ သနားစရာမိန်းမငယ်လေး... ယောင်္ကျားဆိုရင် စကားတောင်မပြောရဲအောင် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့... ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ စိတ္တဇထွက်ပေါက်ကို လူမမြင်ရဘဲ Chat လို့ရတဲ့ Dating App တစ်ခုမှာ ဖွင့်ထုတ်ထားရာက ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ...။ (အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သူများ လုံးဝမကြည့်သင့်ပါ။) File size…(850 MB) and (340 MB) Quality…Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration….01:33:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….RGB Translated by Dark Side TNL
[18+] Hana Torikago (2013)
Romeo + Juliet ( 1996 ) Romeo & Juliet အကယ်၍များ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အကြီးအကျယ်ဆုံး အချစ်ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ကို မေးလာရင် William Shakespeare ရဲ့ ရိုမီရို ဂျူးးလိယက်ကို ကျွန်တော်သတိရမိလိမ့်မယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာကောင်းတစ်ခုက ခေတ်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်ဆိုသလိုပဲ Romeo & Julietဟာ သက္ကရာဇ်၁၅၀၀ကျော်ကနေ ယနေ့ ၂၀၀၀ကျော်အထိ ထင်ရှားဆဲ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်တည်နေဆဲပါပဲ။ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ရိုမီရို ဂျူးးလိယက်ပြဇာတ်ဟာ Stared-Crossed Loverလို့ခေါ်တဲ့ သူက ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်က သူ့အတွက် ဖြစ်တည်ပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီးသား ချစ်သူ ၂ယောက်ရဲ့ ကြယ်တွေဆီမှာ သတ်မှတ်ပြီးသား ကံကြမ္မာတွေကို လွန်ဆန်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ " Romeo must die "လို့ ပြောတဲ့အထိ အာဃာတအချို့နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အကျည်းတန်မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ လှပမှုကို အချိုးကျကျ ရောစပ်ထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒီနေ့ထိထက်တိုင်တော့ ဟောင်းမသွားသေးတဲ့ အကြိမ်ကြိမ် Rebootလုပ်ခံရပြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Versionမှာတော့ Modern ပုံစံနဲ့ ပြန်အသက်သွင်းထားပေမဲ့ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ပြဇာတ်ကစကားတွေအကုန်ယူသုံးထားပါတယ်။ ဒါကလည်း ဒီကားရဲ့ တစ်မူ ထူးချက်ပါပဲ။ သုံးထားတဲ့ မင်းသားကလည်း Leonardo ...
Hunter Killer(2018) Hunter Killer(2018) ((အက်ရှင်ဦးစားပေးစစ်ကားဖြစ်သဖြင့် WEB-DL လေးထွက်ထွက်ချင်း Update ပေးလိုက်ပါသည်...)) စစ်ကားကောင်းတွေ ငတ်နေကြသူတွေအတွက် ရုရှားနဲ့ အမေရိကန်ဆော်ကြမယ့် 2018 ထွက် Hunter Killer ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.... Hunter Killer ဆိုတာက အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘော အမျိုးအစားတစ်ခုရဲ့နာမည်ဆိုပါတော့... တစ်နေ့ အမေရိကန်ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး (တန်ပါဘေး) ဟာ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ ကင်းထောက်နေတုန်း ရုရှား ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားတာကြားလိုက်ရပါတယ်... ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားသလဲ စုံစမ်းနေတုန်း မရှေးမနှောင်းမှာပဲ သူတို့သင်္ဘော တန်ပါဘေးလည်း ဒုံးကျည်ထိမှန်ပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ် ...အမေရိကန်အစိုးရ နဲ့ ရုရှားအစိုးရလည်း ဘယ်သူက စတင်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးမှာအထိအခိုက်ရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်... ဒါကြောင့် အမေရိကန် ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက နစ်မြုပ်သွားတဲ့ တန်ပါဘေးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ကပ္ပတိန် ဂျိုးဂလက်စ် ဦးစီးတဲ့ Hunter killer တစ်စီးလွှတ်ပါတော့တယ်... မြေပြင်မှာ လည်း ရုရှားသမ္မတရဲ့ခြေလှမ်းတွေစောင့်ကြည့်ဖို့ အထူးစစ်သားလေးယောက် ချထားလိုက်ပါတယ်.... ရုရှား အမေရိကန် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိကြီးကျယ်ပြီး တတိယကမ္ဘာစစ်ကို ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သလားဆိုတာ ...
Blue Lagoon: The Awakening (2012) အမ်မာနဲ့ ဒင်းဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူလေးနဲ့ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ဟာ အတန်းကလိုက်ပို့တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် အရမ်းကိုတော်ပြီးတော့ ကျောင်းရဲ့အပျိုစင်ကြယ်ပွင့်လေး အမ်မာနဲ့ ကျောင်းမှာဆို ဘယ်သူနဲ့အဆက်အဆံမရှိတဲ့ဒင်းတို့ဟာ ကျောင်းသားတွေခိုးပြီးတော့ကဲကြတဲ့သဘောင်္ပေါ်ကပါတီကနေ ပင်လယ်ထဲကိုပြုတ်အကျပြီးမှာတော့ သူတို့တွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ အရာရာကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့စီစဉ်ထားတတ်တဲ့အမ်မာအတွက်ကတော့ ကျွန်းပေါ်မှာဘာမှမရှိပဲနေရထိုင်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပေမယ့် သဘာဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အေးဆေးနေတတ်တဲ့ဒင်းအတွက်ကတော့ ပျော်စရာခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားကိုးနေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲ အမ်မာနဲ့ဒင်းတို့ကြားမှာရင်းနှီးမှုထက်ကျော်လွန်တဲ့စိတ်တွေပိုလာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီတော့ အမ်မာနဲ့ဒင်းနဲ့သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကျွန်းပေါ်မှာပဲနေထိုင်ရင်းနဲ့ကုန်ဆုံးသွားမလား ကယ်တင်မဲ့သူတွေပဲရောက်ရှိလာနိုင်မလား သူတို့မြို့ကိုပြန်ရောက်သွားရင်တောင် သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာနိင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုလို့ကောင်းတဲ့ဇတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဘာသာပြန်ပေးထားတာတော့Aye Chansuဖြစ်ပြီးsithuကencodeပေးထားပါတယ်
IMDB: 5.6/10 11,995 votes
IMDB: 5.1/10 16,395 votes
The Blue Lagoon (1980) ပင်လယ်ပြင်မှာသဘောင်္တစ်စင်းဟာ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သဘောင်္ပေါ်မှာ ပါလာတဲ့လူတွေအကုန်အသက်လုပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာ ရစ်ချတ်နဲ့ အမ်မလိုင်းဆိုတဲ့မောင်နှမဝမ်းကွဲနှစ်ယောက်ကို သဘောင်္ရဲ့ချက်ကြီးဖြစ်တဲ့ ပတ်တီတစ်ယောက်ကယ်တင်ရင်းနဲ့ပဲ လူသူဝေးတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာသောင်တင်နေပါတော့တယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိန်းပေးရင်းနဲ့ ပတ်တီတစ်ယောက် အရက်မူးလွန်ပြီးတော့ ရေနစ်သေဆုံးသွားတဲ့အခါတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကျွန်းလေးပေါ်မှာ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေထိုင်ရပါတော့တယ် တဖြေးဖြေးနဲ့ ရစ်ချတ်နဲ့အမ်မလိုင်းတို့နှစ်ယောက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ လူသားဗီဇအရသွေးသားဆန္ဒကိစ္စတွေပါ စိတ်ဝင်စားလာပါတော့တယ် ဒီတော့ ရစ်ချတ်နဲ့အမ်မလိုင်းတို့ကိုကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့သူပေါ်လာမှာလား သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာ စိတ်မရိုးမရွဖြစ်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ စိတ်မရိုးမရွဆိုတာ အမ်မလိုင်းကတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တချို့သောအခန်းတွေက မျက်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကာပြီး(ချောင်းကြည့်ပေါ့)ကြည့်ရမဲ့အခန်းလေးတွေပါပါတယ် နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဘာသာပြန်ပေးထားတာတော့Aye Chansuဖြစ်ပြီးsithuကencodeပေးထားပါတယ်
IMDB: 5.7/10 57,301 votes
Endless Loop ( 2018 ) ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာတစ်ခါမှမဆုံဖူးတဲ့သူစိမ်း ၇ယောက်ကား တစ်စီးပေါ်အတူတူစီးလာပြီး မမျှော်လင့်ပဲဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲကို ရောက်သွားရာကနေ Endless Loop တစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ် လှိုဏ်ခေါင်းထဲကလည်းပြန်မထွက်နိုင်..လှိုဏ်ခေါင်းထဲက အချိန်က အပြင်ကအချိန်ထက်လည်းပိုမြန်ဆန်လွန်းနေတယ်.. အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အားလုံးစုစည်းပြီးကြိုးစားရပါတော့မယ် စွန့်စားမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သန်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဘာတွေကြုံတွေ့လာရမလဲ.... အလောင်းတွေကရောဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ..... မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာနိုင်မလဲ...... ဒီလူ ၇ယောက်ကရောဘယ်လိုတွေဆက်စပ်မှုရှိလဲ...... နောက်ဆုံးဘယ်သူတွေကရော ဒီလှိုဏ်ခေါင်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားနိုင်မလဲ....... ဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိလဲ...... ဇာတ်လမ်းအစကနေစိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့အဆုံးထိ ဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ စိတ္တဇဆန်ဆန်မှုခင်းဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန် အိပြည့်ဖြစ်ပါတယ် Subtitle & Encoder : LK
Revenger (2019) Action ကားပရိသတ်တွေအတွက် သဘောတွေ့စေမဲ့ ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားတော်တော်များများဟာ အတော်လေးကြည့်ကောင်းတာများပါတယ်။ ရိုက်ကူးပုံတွေကောင်းမွန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက် ကိုရီးယားအက်ရှင်ကးတွေကိုလူကြည့်များလာကြပါတယ်။ ဒီကားလေးကလည်း အက်ရှင်သီးသန့်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အသတ်အပုတ် အတိုက်အခိုက် အကွဲအပြဲ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့တွေ့မြင်ရမဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းအများစုက သတ်ပုတ်နေတာဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရတာပျင်းမသွားစေပါဘူး။ အက်ရှင်သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းကိုသိပ်မညွှန်းတော့ပါဘူး။ အက်ရှင်ပရိသတ်တွေအတွက် တကယ်မပျင်းရစေမဲ့ရိုက်ချက်တွေ အသတ်အပုတ်တွေကိုသေချာတင်ဆက်ထားပြီး နောင်တရစေမဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကိုသူရပါ) File Size : (800 MB) and (380 MB) Quality : NF WEB-DL 720p Running Time : 1h 40min Format : Mp4 Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG Translated by Thura Zarni Aung Encoded by Thanhtike Zaw
All the Devil’s Men (2018) Action ကားပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ CIA ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်ပြန်ကြေးစားတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကြားထားက အရှုပ်တော်ပုံကို ပြထားတာပါ။ သူတို့လောကရဲ့ အမြဲတမ်း ရန်သူ အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာ မရှိပုံတွေ၊ အချင်းချင်း တစ်ပတ်ရိုက်ကြတဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့မို့ ကြည့်ရတာ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကိုသိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းကြည့်ကြပါ... File Size : (860 MB) & (225 MB) Quality :Wed-DL 720p Running Time :1hr 35 min Format : Mp4 Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Encoded by Moe Myint Lwin
The Whispering(2018) The Whispering(2018) ကိုင်း Horrorကားကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အတွက် The Whispering(2018) ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်..... အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယောအွန်းဟာတစ်ယောက် အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဆက်တိုက်မက်နေခဲ့တယ် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာ အမှတ်နည်းခဲ့လို စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပိုပြီး ကြုံတွေ့လာရတယ် ယောအွန်းဟာ နဲ့အတူ အတန်းဖော်ငါးယောက်ဟာ ကမ်းခြေဘက်ကို အပျော်ခရီးထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်.. အပြန်လမ်းမှာတော့ ၀ူဆောင်းရဲ့ စည်းရုံးရေးကောင်းမှုကြောင့် သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုလုပ်လိုက်ကြတယ်...အဲ့ဒါကတော့ သရဲအိမ်ထဲကိုသွားပြီး သရဲအိမ်ထဲက သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို အင်တာနက်မှာ တိုက်ရိုက်လွှင့်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်... အဲ့ဒီနောက်မှာတော့.................................. ကိုင်း horror ကားကြိုက်သူတွေ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးနော်... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ SCRN ပဲဖြစ်ပါတယ်.... File Size : (850MB) and (317 MB) Quality :့HD-Rip 720p, Format…mp4 Duration…01:30:00 Genre : Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by SCRN Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 5/10 1350 votes
The Place Beyond the Pines(2012) The Place Beyond the Pines(2012) IMDb ....... 7.3,,,Rotten.....80% ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှေ့ဖြစ်မယ့် အခန်းတွေကို တိတ်တဆိတ်ခန့်မှန်းတတ်ပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့ကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်းမှ တတ်နိုင်သလောက်အဖြေထုတ်တတ်ကြတယ်.....မျှော်လင့်မှန်းဆထားတဲ့ ကိစ္စကို နောက်အခန်းမှာဖြစ်လာရင် ပျော်ခဲ့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပေမယ့် တကမ်းတမ်းတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကျေနပ်မှုမရခဲ့ဘူး...ထရေလာကြည့်ရုံနဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးမှန်းလို့ရတဲ့ မြန်မာကားအချို့ကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့လေ.... .....ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး Twist တွေတပြုံကြီးနဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး သဘောကျကြသလို ရင်ထဲလည်း တစ်သသကျန်နေတတ်တယ်...ယ္ခုဇာတ်ကား The Place Beyond the Pines က The Usual Suspects ,Fight Club,Primal Fear တို့လို မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဇာတ်ကားခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကို ကောင်းကောင်းကြီး စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်..ပြီးတော့ ဒီကားက ပေးချင်တဲ့ Message တွေကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်.... မော်တော်ဆိုင်ကယ်စတန့်သမားတစ်ယောက်... သူ့နာမည်က Luke....သူ့ကြည့်ရတာ သံဇကာကမ္ဘာလုံးထဲမှာ ဆိုင်ကယ်စတန့်စီးလိုက် စီးကရက်ရှိုက်လိုက်နဲ့ ဘ၀ကိုခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုံပဲ... တစ်နေ့တော့ သူ့ဆီကို ရည်းစားဟောင်း ရိုမေနီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်...... အဲ့ဒီမှာ မမျှော်လင့်ဘဲသိလိုက်ရတာက သူနဲ့ အဲ့ဒီကောင်မလေးဟာ သားလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ... Luke ဟာ ကိုယ်တိုင်က ဖခင်ရဲ့ပစ်မယ်မှုနဲ့ကြီးပျင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ သူ့သားကို သူ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူး...ဒီတော့ ...
IMDB: 7.3/10 220,799 votes
Love Sonia (2018) ( 18+ လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတိုင်း အပြာကားလို့မထင်စေချင်ပါဘူးရုပ်ရှင်ကားရဲ့ Age Rating အရဆို Adult Only ဆိုတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ကြည့်ရှု့လို့ရပါတယ် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ လိင်အသာပေးအခန်းတွေပါတာကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေ၊ မိသားစုနဲ့ကြည့်ရှု့ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး) ======================================== ဟောဒီလောကမှာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ အရှုံးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းပူးတွဲရှိနေတတ်ပါတယ် ဒီတော့ အမြတ်ရဖို့ဆိုရင် အရင်းအနှီးရှိရပါတယ်၊ ရင်နှီးနိုင်လျှက်ရှုံးရသည်က တကဏ္ဌပါ မရင်းနှီးနိုင်ရင်တော့ အကျိုးမြတ်မရနိုင်တာ လုံးဝအသေချာပါပဲ ဒီတော့ ရင်းနှီးဖို့ဘာလိုလာမလဲဆို ပိုင်ဆိုင်မှုလိုလာပါမယ် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရင် အရင်းအနှီးဟာ အကြွေးဘက်ကို ဦးတည်သွားတတ်လေတယ် ဒီခေတ်မှာ မရင်းနှီးနိုင်လို့ ရှုံးနေကြတာအများကြီးမရင်းနှီးနိုင်လို့ အကြွေးတင်နေကြတာအများကြီးပါ အသိပညာချို့တဲ့ပြီး ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ မိသားစုတွေမှာ အရင်းအနှီးဆိုတာ ဘာဖြစ်လေမလဲ ... ၉၀ ရာခိုင်းနှုန်းကတော့ သူတို့သားသမီးပါပဲ သားသမီးကို ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုလို့ယူဆပြီး အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ရင်းနှီးလိုက်ကြပေမယ့် အကျိုးအမြတ်မရမယ့်အပြင် ဆုံးရှုံးသွားတာ ဒုနဲ့ဒေးပါ တောရွာတွေမှာဆို ပညာသင်ရမယ့် အရွယ်ရောက်နေပေမယ့် လယ်ထဲဆင်းနေရတာ၊ မအေနဲ့ဈေးအတူရောင်းနေရတာတွေကိုယ့်အောက်က အငယ်ကိုထိန်းကျောင်းနေရတာတွေ မနည်းလှပါဘူး နောက်ဆုံး အဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါ ထွက်ပေါက်တစ်ခုက ဒီသားသမီးကို ရရာအလုပ်ခိုင်းတော့တာပါပဲ ... အခုဇာတ်ကားလေးကလည်း ...
Short flim 4